China NO.4 coil steel stainless kwemveliso kunye Factory | IHuaxiao
Sino Stainless Capacity malunga NO.4 coil steel stainless
Isicelo malunga NO.4 coil steel stainless
NO.4 Ikhoyili yentsimbi engenasici isetyenziswa ngokubanzi kwisinyusi, izinyuko ezizihambelayo, ikhitshi kunye nendawo yokuhlambela
Inkcazo ngokubanzi malunga ne-stainless steel brushed
Umphezulu wentsimbi yebrashi enqabileyo ufana nokuthungwa kwe-filamentous, le yitekhnoloji yokulungisa intsimbi engenasici. Umphezulu yi-matte, jonga ngononophelo kumphezulu womkhondo wokuthungwa, kodwa awunakuchukumisa. Kunokunxiba okuqaqambe ngentsimbi okungagqwaliyo, kujongeka ngakumbi kwinqanaba.
Umgangatho wentsimbi engenasici ococekileyo kufuneka ucoceke
Ukucwangciswa okucociweyo okanye okucociweyo kuya kwenza ubungqingqwa bentsimbi engenacici ukuba icekeceke kancinci, ihlala ikwi-0.05 ~ 0.1mm. Ukongeza, ngenxa yomzimba womntu, ngakumbi isundu sinegrisi eyomeleleyo kunye nokufihla ukubila, intsimbi engenasici inyibilikisiwe ihlala ishiya iminwe ecacileyo emva kokubanjwa ngesandla okanye ngomzimba womntu, ngakumbi isundu sinamafutha aqinileyo kunye nokubila , ke ihlala ifuna ukucoceka ngexesha elifanelekileyo.
Iindidi indlela Brush okanye ipolishi NO.4 insimbi entanjeni
Okwangoku ibrashi yentsimbi engenasici ibandakanya indlela engezantsi: ukusila kweoyile, ukugaya okomileyo, ukugaya amanzi, ukugaya ioyile ngefuthe elingcono, kunye nokubonakala kwabantu abanelisekile, ngeli xesha kuyabiza
Thelekisa malunga NO. 4 HL kunye NO.8 steel brushing okanye ukugaya
Ikhoyili yentsimbi engenasici okanye ibrashi yimveliso eqhelekileyo kwimarike, zininzi umgca omfutshane okanye omde ogubungele yonke i-coil yentsimbi okanye iphepha. Umphezulu wesipili we-8K sisiphumo esifanayo nesipili seglasi. Isinyithi esinyibilikisiweyo sisiphumo sokulungiswa kwebhanti le-matte, ukuqhubekeka kulula kwaye kuyakhawuleza. Kodwa umphezulu wesipili we-8K ufuna amaqela angaphezu kwesibhozo izixhobo, eyokuqala sisanti erhabaxa, emva koko isuse umtshangatshangiso womgca wokukrwela kunye nolunye uthotho lwemisebenzi yokugqibezela umphumo wesipili, isipili sinzima kakhulu, kwaye umgangatho nawo ezinye zahlukile kwimveliso eyahlukeneyo
Egqithileyo Iikhoyili zentsimbi ezingama-430 ezishushu neziqengqelekileyo
Okulandelayo: BA coil insimbi